Amin’izao fotoana izao, ny fahafahana mba hameno ny toerana eo anivon’ireo tambajotra sosialy toy ny tsy tsara. Sary an-tsaina fotsiny fa anao (Eny, ianao) dia mety ho lasa ny faharoa milaza ny fialàn’i Durov, na mark Zuckerberg ny Facebook. Tsara, sa tsy izany. Mazava tsara, fa ianareo dia tsy ho lasa endrika fanta-daza teo amin’ny mpamorona ny tambajotra sosialy, raha toa ka tsy manaraka ny toro-hevitra avy amin’ny lasa traikefa.
Rehefa mamorona tambajotra sosialy amin’ny fikasana ho lasa lehibe indrindra, olo-malaza amin’ny Aterineto, dia tsara ny manaraka ny filozofia ny Steve jobs:»ratsy mpanakanto mindrana, mpanakanto lehibe mangalatra.»Marina Steve.
Raha jerena izany rehetra izany, afaka milaza isika fa vonona ny hanomboka ny diany ny fandresena akany sosialy tambajotra, tarihin’ny ny zava-nitranga teo aloha mpandresy. Te-maniry tsara vintana ianao, nefa inoana fa tsy dia ilaina. Raha manaraka ny manaraka ireo endrika, fahombiazana dia tsy azo ihodivirana.
Dingana amin’ny fanorenana ny tambajotra sosialy:
Dingana: Hanana ny foto-kevitra
ny dingana voalohany amin’ny famoronana tambajotra sosialy
Ny dingana voalohany mankany amin’ny famoronana ny tsara indrindra amin’ny tambajotra sosialy dia hanana hevitra. Na izany aza, alohan’ny hanombohanao mba hahatratrarana izany tanjona izany, dia mila manomana. Amin’ny fomba ahoana. Hijanona ao an-tsekoly (Kolejy, lycée, ny sekoly fanabeazana fototra ireo, tsy inona na inona), toy izany ihany no misakana anao. Voalohany indrindra, vetivety familiarize ny tenanao amin’ny asa natolotry ny Facebook, ary avy eo dia halalino maro mahomby ny tambajotra toy ny»Hiaina ao akaikin’ny»sy hanangana azy. Izany dia hahatratra ny dingana voalohany. Inona. Eto isika dia tsy mamorona na inona na inona ny vaovao, mahatsiaro izany. Bebe kokoa, amin’ny dingana faharoa intsony.
Dingana: Mino ny anarany
ny dingana faharoa ao amin’ny fananganana tambajotra
Eto dia afaka mandeha fomba roa. Afaka manambatra ny roa tsy mifanaraka teny (e.g, Facebook). Kanefa aza adino fa ny tranonkala anarana tokony mamaritra mazava ny tanjona. Raha ny tena izy, amin’ny dingana izany ianao dia afaka mametra ihany ny saina tia karokaroka. Raha toa ka tsy manana hevitra, miezaka haka zavatra ao an-trano, ary nataony tao ny anaram-boninahitra. Raha ity fomba ity dia tsy ho anao, ianao dia afaka tonga amin’ny tanteraka ny dikany teny izay toa zava-dehibe.
Dingana: Hahazo renivohitra venture
Dingana rehefa mamorona tambajotra sosialy
Noho izany andeha isika hiresaka momba ny fitantanam-Bola. Hampitombo ny tambajotra sosialy iray izay no namorona mafy akony any amin’ny fiaraha-monina dia lany vola be, ary afa-tsy, misy dia tena mety ho avo»hodorana». Aza manahy, izay no antony ny orinasa misahana manokana ny renivohitra barotra, izay afaka manome vola ianao. Jereo koa ny orinasa ary manao ny fanendrena ireo izay ianao dia endrika fanahy.
Ianao izao ihany no mila mandinika ny raharaham-barotra ny modely. Izany no tsotra. Nahoana no ilaina. Amin’ny ankapobeny, satria ny mpampiasa vola matetika no miasa amin’ny ny modely antitra, ary tsy dia fahita firy ny olona teo anivony tsara ny vagaries ny Aterineto. Mila loko antontan’isa, pirinty tabilao sy ireo fampahalalana aseho an-tsoratra, toy izany koa ny mba ianaro ny voambolana. Azonao atao ny mampiasa matetika ny teny tahaka ny hoe»ny web.», na»ny toerana ara-tsosialy». Izany dia hanampy anao mba hanome toky azy ireo fa anao hahafantatra ny zavatra ianao niresaka momba ny. Raha vao ny fanolorana dia vita, dia afaka hifandray tanana ny mpampiasa vola sy handray ny vola.
Dingana: Manakarama mpiasa
Rehefa mahazo famatsiam-bola, ny zavatra voalohany tokony atao dia ny mba hanomboka ny mpiasa. Ankehitriny ianao dia nitifitra lehibe, dia tsy afaka ny tsy mandany fotoana amin’ny mivantana ny asa dingana. Noho izany, iza no manakarama. Tonga eto ny tsara indrindra — ny mazava ho azy, ny namana. Ny tovovavy tsara avy amin’ny Anjerimanontolo. Ny mpandrindra ilay Sampan-draharaha-barotra. Ny lehilahy izay milalao eo kilasy ny fiara mifono vy lalao eo amin’ny solosaina.
Amin’ny Ankapobeny, mahazo ny hevitra. Ho mangatsiatsiaka ny lohany, ary aza adino tsara karama noho ny asa. Tsarovy, izy no fototry ny rafitra. Andramo ny hahatonga azy ireo ho sambatra — aoka tsy tena mafy ny fe-potoana sy vola foana amin’ny fotoana.
Dingana: Fampandrosoana ny toerana
dingana famoronana tambajotra sosialy
Tonga ny fotoana mba mahakasika ny programa. Indrisy anefa fa, misy toe-javatra izay ankapobeny lehibe sy mampihomehy lehilahy izay ianao no namako, tsy miraharaha izany anefa ao amin’ny fandaharana. Mino izany na tsy, fa ho an’ny rehetra ny olana dia tena tsotra ny vahaolana. Ny fototry ny tambajotra sosialy no mandray ny hevitra hafa, ary manova azy amin’ny fombany. Tadidio fa lehibe ny mpanakanto hangalatra. Tonga ny fotoana mba hampihatra izany hevitra filozofika ho fomba fanao. Mahalaza ny hevitry ny fehezan-dalàna eo amin’ny toerana tena tambajotra sosialy, ampio ny famantarana sy nahavita ianao. Raha toa ianao ka iray tamin ireo izay kamo tsy afaka refesina, dia afaka mampiasa fotsiny ny clone endrika Facebook.
Dingana: Nalefan ny namany sary
Rehefa afaka soa aman-tsara ny fanamboarana ny toerana tena tambajotra sosialy, na rehefa afaka mampivoatra ny tsy manam-paharoa fehezan-dalàna, ny fotoana, ny habaka fandefasana. Hahazo ny tranonkala fampiantranoana register ny sehatra anarana ary manomboka downloading antontan-taratasy. Dingana rehetra maka adiny iray na roa.
Noho izany, ny namany sary afaka manompo maro tapitrisa pejy fomba fijery, ary satria izany dia tambajotra sosialy — dia ilaina ny mihevitra fa efa any amin’ny toerana voalohany.
Dingana: Mipetraka sy miandry ny tombom-barotra
Dingana ao amin’ny fananganana tambajotra sosialy
Raha vao ny tambajotra sosialy dia nanomboka ary an-tapitrisany maro mpampiasa vaovao dia hanomboka ho tonga avy ny andro ny andro, tonga ny fotoana mba hahazoana. Amin’ny fomba ahoana. Enta-mavesatra izany amin’ny dokam-barotra. Ny olona dia zara raha manohitra ny fitantanana ny fiainana manokana na ny dokam-barotra. Mihevitra ve ianao fa Zuckerberg nanao an’arivony tapitrisa.
Tsy toy ny Zuckerberg, na dia teo aza izany, dia mila mampiasa ny karazana dokam-barotra: pop-DEHIBE, sora-baventy, contextual dokam-barotra sy ny sisa. Izany dia hanampy anao mba hahazoana antoka fa ny toerana dia manambara feno ny hery anaty. Izany no ihany koa fanatsarana ny fifandraisana amin’ny namany sary, araka izany dia mamela ny mpampiasa mba hahita zava-baovao: fitsapana, ary maimaim-poana ny santionany ny vokatra for levitra. Raha vao manomboka ny dokam-barotra rafitra, afaka mipetraka sy mandinika ny fomba ny mpampiasa afa-po amin’ny harena, sy ny vola latsaka ao amin’ny kitapom-batsy.
Dingana: Mivarotra ny namany sary
Dingana mamorona tambajotra sosialy tonga ny fotoana mba hivarotra
Raha vao manana ny ampy ny isan’ny mpitsidika, ary ny mpanao dokam-barotra avy amin’ny manerana izao tontolo izao, dia tena mety hiatrika ny olana mihena ny tombom-barotra. Tamin’ny dingana izany dia zava-dehibe mba tsy hatahotra — rehefa afaka rehetra, izany no fotoana izao dia efa niandry. Tena. Eny, marina izany. Tonga ny fotoana mba hivarotra ny tranonkala ny orinasa izay te-hitandrina azy velona.
Izany dia ho tena sarotra ny fanapahan-kevitra, fa ao ny raharaha ny mety ho tsara kokoa ny hivarotra amin’ny toerana ny orinasa izay efa nametraka ny tenany ao anatin’ity raharaha ity. Ankoatra izany, dia ilaina mba hanamarihana amin’ny vola tsy latsaky ny $ tapitrisa.
Dingana: hisotro ronono
Rehefa mahazo ny maso namerenana, ny fotoana ho avy ny sisa. Ny farany enim-bolana no tena sarotra ho anao, ary ankehitriny ianao dia hahazo ny sisa ireo tranga ireo sy ny asa. eo amin’ny fiainana. Hahita ny Paradisa amin’ny tany mafana ny firenena. Bahamas, lahy, i Thailandy amin’ny farany.
Mifidy ny toerana ho an’ny tenany, mividy trano amin’ny alalan’ny ny ranomasina, ary hampitaovana an-tranony miaraka amin’ny teknolojia farany. Mazava ho azy, aza adino ny mividy ny yacht, ary maro ny fiara. Tamin’ny dingana izany eo amin’ny fiainanao ianao dia manana olana hafa — izay marika ny fiara mba hifidy
Online Mampiaraka toerana maimaim-poana →